ရွှေဘိုသား: December 2007
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Wednesday, December 12, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ ကဗျာ / Comments: (0)
We don’t want you to be Dale Carnegie.
We don't want you to be P Moe Hnin.
You must be fighting bloody peacock.
We don't want you to be Prime Minister
We don't want you to be Observer.
You must be Spatacat.
We want to be sword in your hands.
We want to trust the every strike which you made.
Everybody wants to hear the sound of your war drum.
Every person confuses everything, but you didn't.
We do hope you.
Your wizard must efficient than watching crystal ball.
We do trust you.
Our troops need your stronghold leading.
Swords will disable, if polish then polish.
Don't feed our soul by the news of money market.
Don't feed our soul by the news of Than Shwe's psychological troubles or not.
Don't feed our soul by the statements of political weather.
We want to destroy the Junta, without the shadow of organizational attitude.
You need to show the way to us.
We need the movement more then the words
No need confusing like educated person
We want to die as Spartan, at the battle
Even we die, couldn't take Daung Flag to the palace
It is honors then alive with dying Daung Flag..that We Believe
Hello! Ko Moe Tee..
We do love you as the side of REVOLUTIONARY.
Moe Htet Nay
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား / အကြောင်းအရာကတော့ ကဗျာ / Comments: (5)
ဟယ်လို ကိုမိုးသီး ခင်ဗျားကို ကျနော်တို့ ချစ်တယ်
ခင်ဗျားကို ဒေးကာနက်ဂျီ အဖြစ် မလိုချင်ဘူး။
ခင်ဗျားကို ပီမိုးနင်း အဖြစ် မလိုချင်ဘူး။
ခင်ဗျားဟာ စွေးစွေးနီခွပ်ဒေါင်း ဖြစ်ရမယ်။
ခင်ဗျားကို ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် မလိုချင်ဘူး။
ခင်ဗျားကို လေ့လာသူအခါတော်ပေး အဖြစ် မလိုချင်ဘူး။
ခင်ဗျားဟာ စပါတာကပ် ဖြစ်ရမယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဟာခင်ဗျား လက်ထဲကဓားဖြစ်ချင်တယ်။
ခင်ဗျား ခုတ်ချက်တိုင်းကို ယုံချင်တယ်။
အားလုံးက ခင်ဗျား စစ်ချီဗုံသံကြားချင်တယ်။
အားလုံးက အားလုံးကို တွေဝေနေတဲ့ထဲ ခင်ဗျားမပါဘူး။
ခင်ဗျား ပဉ္စလက်က ဓာတ်ဖန်လုံးကြည့်တာထက်ပိုမယ်။
ခင်ဗျား ဦးဆောင်မှုနောက်မှာ ကျနော်တို့ နေချင်တယ်။
ဓားတွေက ထပ်သွေးလဲ အသွားပဲ့တာပဲ ရှိတော့မယ်။
ကျနော်တို့ လိုချင်တာ ဒေါ်လာဈေး သတင်း မဟုတ်ဘူး။
ကျနော်တို့ လိုချင်တာ စစ်ခွေးရူးမရူး မဟုတ်ဘူး။
ကျနော်တို့ လိုချင်တာ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက် မဟုတ်ဘူး။
ပါတီစွဲ ဝါဒစွဲ ဆိုတာထက် ကျနော်တို့ စစ်အာဏာရှင်ကို ဖြိုချင်တယ်။
ခင်ဗျား လမ်းပြဖို့ လိုနေတယ်။
စကားလုံးတွေ ထက် အရွေ့ ပါချင်တယ်။
ပညာတတ်ဆန်တဲ့ တွေဝေမှုတွေ အစား
အလံသေပြီး လူရှင်တဲ့ ဘဝထက် ကောင်းမယ်….ယုံတယ်။
ဟယ်လို ကိုမိုးသီး !
ခင်ဗျားကို တော်လှန်ရေးသမား အဖြစ် ကျနော်တို့ ချစ်တယ်။
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Monday, December 10, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ အတွေးနဲ့အရေး / Comments: (7)
ကျနော်ဒီ ဆောင်းပါးကို မရေးခင် အကြိမ်ကြိမ် ချိန်ဆပြီးမှ နောက်ဆုံးရေးမယ် ဆိုပြီး ဆုံးဖြစ် ချက်ချလိုက်မိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကြောင့် ကျနော် သိက္ခာရပ်တည်ချက်ကို ထိခိုက်သွားနိုင် တယ်ဆိုတာ သိပေမယ် ကျနော် မပြောရရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် တာဝန်ကျေတယ်လို့ ဘယ်လိုမှ ထင်လို့ ရတော့မှာမှဟုတ်ဘူး။ ကျနော် အခုရေးမဲ့ ကိစ္စတွေ က ကျနော်စိတ်ပျက်နေတာ ကြာ ပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မသိချင်ဟန် ဆောင်ပြီးနေခဲ့တာ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် မရေးရဲတာလဲ ပါပါတယ်။ ကျနော့အနေအထား ကျနော့ အတွေ့ အကြုံ နဲ့ ဆရာကြီး ဝင်လုပ်တယ်အပြောခံရမှာ စိုးရိမ်တာတစ်ကြောင်း။ ကိုယ်နဲ့ တည့်မပတ်သက်တာဆိုရင် ဖာသိဖာသာနေမယ် ဆိုတဲ့ လူပီသတဲ့ စိတ်လေးခေါင်းထောင်လာတာ ကတစ်ကြောင်းကြောင့် မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အဆဲခံရမှာလဲ ကြောက်တာပါသပေါ့ဗျာ။ ခုတော့ ဒီစာရေးလို့ ဖြစ်လာသမျှ အကျိုးဆက်အားလုံး ခံမယ်လို့ ဆုံးဖြစ်ပြီး ရေးလိုက်ရပါတယ်။
ကျနော် ဘလော့တစ်ခုမှာ ကော့မန့် ရေးလိုက်မိတယ်ဗျာ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျနော်ဘလော့တွေ မှာ ကော့မန့် ရေးလေ့မရှိပါဘူး။ စိတ်ထဲမယ် စိတ်မကောင်းတာတွေရော စိုးရိမ်တာတွေရော ပြွန်းသွား လို့ ကော့မန့် က တော်တော်လည်းရှည်သွားတယ်။ အဲဒီပို့ ဖတ်ပြီးတဲ့ လူတွေက ကျနော်နား ကို စာတွေပို့ ကြ၊ ဂျီတော့ကနေ ပြောကြ နဲ့ ပွဲကို စည်လို့ ပါလား။ ကျနော်သုံးလိုက် မိတဲ့ စကားတစ်ခုအပေါ် တချို့ ကလဲ မကျေနပ်ကြ တချို့ ကလည်း ကျနော့အပေါ် အထင်လွဲ မှာ စိုးရိမ်ကြနဲ့ ။ ကျနော်ထင်တဲ့ အတိုင်းရိုးရိုးသားသားရေးလိုက်မိတာပါ ။ ကျနော်ရေးမိတာက တော့ “ကျနော့ တသီပုဂ္ဂလ အမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ ကတော့ ဘလော့ဂါတွေ အကုန်လုံး ကိုယ် ထင်ရာ ကိုယ် လုပ်နေတဲ့ သဘောရှိပါတယ်။” ဆိုတဲ့စာသားပါ။ သိပ်ပြင်းထန်သွားတယ် လို့အားလုံးမြင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော် သိထာတာ ဘလော့ဂါတွေဆိုတာ အများစုသိပ်စည်းလုံး တယ်။ ကျနော်ဘလော့ ဆိုတာ ဖြူလားမဲလား မသိသေးတဲ့ အချိန် (စက်တင်ဘာ မတိုင်မှီ) က ဘလော့စာအုပ်ထုတ်ဖို့တိုင်ပင်ကြဆွေးနွေးကြ ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြားဖူးတယ်။ ကျနော် တကယ် တော်တော် လေးစားပါတယ်။ ဒီလောက်တစ်ကွဲတစ်ပြား နေတဲ့လူတွေ စုပေါင်းပြီး အလုပ်တစ်ခုထဲကို လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာ တော်ရုံနားလည်မှု တော်ရုံစည်းလုံးမှုနဲ့ မရပါဘူး။ ကျောင်းတွေမှာ Black ကဗျာ စာအုပ်လေးတွေ စုထုတ်ရင်တောင် ပြဿနာက ဒုနဲ့ ထေ။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ တဂျိမ်းဂျိမ်း စကားများရတာက ခဏခဏ။ နောက်ကျနော် ဘလော့ဂါတွေ အကုန်ဆိုတဲ့ စကားသုံးလိုက်မိတာ ကျနော်ရည်ရွယ်တာ တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးကြချွတ်ကြတဲ့ ဘလော့ဂါတွေကို ရည်ရွယ်တာပါ။ ကျနော့စာတပိုဒ်လုံး ကို ဖတ်ရင် ဘယ်ဘလော့ဂါတွေကို ထင်ရာလုပ်တယ် လို့ ကျနော် မြင်တယ်ဆိုတာ သဘော ပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ကျနော် နာစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ပြောသလား။ ဘယ်လို စေတနာ မျိုး နဲ့ ပြောတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျနော်က ဘလောဂါတိုင်း နိုင်ငံရေး ရေးရမယ် ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးမရှိပါဘူး။ ကျနော် အမြဲသွားလေ့ရှိတဲ့ ဘလော့တစ်ခုမှာ နိုင်ငံရေး လုံးဝလောက်နီးနီး မရေးပါဘူး။ ဘလော့ဂါ ဆိုတာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်။ ထင်ရာလုပ် ခွင့်ရှိတယ် ဆိုတာကျနော်လက် ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပိုစ့်တွေ (နိုင်ငံရေး၊လူမှုရေး) အစရှိတာတွေ ရေးတော့မယ် ဆိုရင်တော့ ထင်ရာလုပ်လို့ မရတော့ဘူး လို့ ထင်ပါတယ်။ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်ဘူး လို့ လဲထင်ပါတယ်။
ခုတလော တော်တော်ရေပန်းစား နေတဲ့ စကားလုံး က (SPY)စပိုင်ဆိုတာပဲ။ ကျနော်ကတော့ မနေ့ တစ်နေ့ ကမှ ပြည်ပရောက်လာတာ ဆိုတော့ စပိုင်ဆိုတာကို အရှင်လတ်လတ်လဲ မမြင် ဘူးဖူး။ ဓာတ်ရှင်တွေထဲ ကြည့်ဘူးတာရှိတာပဲ။ ပြည်တွင်းမှာတုန်း ကတော့ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ အကိုတွေ ကို လက်ဖက်ရည်ဝယ်ပေး ဆေးလိပ်သွားဝယ်ပေးလုပ်ရင် သိသလောက်တော့ ပြည်တွင်းမှာ တော့ SPY ဆိုတာ မရှိဘူးဗျ။ အချောင်သမား၊ ဘာရည်ရွယ်ချက်ဦးတည် ချက်မှ မရှိတဲ့လူတွေ၊ လူလူချင်းလူစွာလုပ်ချင် (ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းမရှိပဲ) တဲ့ လူတွေကို သတင်း ပေး (Informer) အနေနဲ့ လက်ဖက်ရည်လေးတိုက်လိုက် မုန့် ဖိုးလေးပေးလိုက် ခိုင်းတာ တွေ တော့ နေရာတကာပဲ။ သူခိုးဂျပိုးလောကရော၊ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ လူတွေ လောကမှာရော နဲမှ မနဲပဲ။ အစကတည်းက အဲလို သတင်းပေးလုပ်တဲ့ သူတွေဆိုတာ သူတို့အခွင့်အရေးလိုချင်လို့ လုပ်တဲ့ လူတွေဆိုတော့ ထောင်စွာထောင်စွာလုပ် တာနဲ့သိပ်မကြာပါ ဘူး ရိပ်မိကုန်တာ များပါတယ်။ တူတူအဖမ်းခံရတယ် တစ်ယောက်က နှစ်ရှည်ထောင်ကျ တယ်။ အဲဒီလူက ပြန်လွတ်လာတယ် ဆိုတာမျိုးတွေ ကြောင့်လဲပါတာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ပြည်တွင်းမှာ တော့ အားလုံးက သတိနဲ့ နေ ရတော့ သိပ်မကြာဘူး သိတာများပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေး ဆရာများကလဲ ဒါမျိုးကြိုသိတော့ သတင်းပေးတစ်ယောက်ကို တစ်ခါသုံး ဘောပင်(န်) လို ၊ ယမ်းမီးခြစ်လို သဘောထားတာကလား။ အသုံးလို တဲ့အထိပဲ အရိုးပေး ကိုက်တယ်။ သုံးမရတော့ ဘူးထင်တာနဲ့ မယာပါသားကို ပထွေးက ကြည့်သလောက်ပဲ ပြန်ကြည့်တော့တာ။
၉၉ ကာလများ ကဆို အင်ဖော်မာတွေ ဆိုတာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာ ကျောင်းသား တွေ ကြားထဲ မှာ သူတို့ ကတောင်ပိုများနေသလို ပဲ။ ကျနော်တို့ က လူငယ်ဆိုတော့ ချောင်းရိုက် မယ် ကအစ ဖွင့်ချမယ်ဆို တာအဆုံး အမျိုးမျိုး ပြောကြတာပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ ရိုက်ရင်ရိုက်မှုနဲ့ ဖမ်းခံရမယ်။ ကံဆိုးရင် ဓမြမှုတို့ လုယက်မှုတို့ ပါပါလာနိုင် သေးတယ်။ (နအဖ အမှုဆင်ဖမ်းလို့ကျနော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ခိုးမှုနဲ့ အချုပ်ခံရဘူးပါ တယ်။ နိုင်ငံရေး ဆက်လုပ်မရအောင် စာရိတ္တမှု လုပ်လိုက်တာပါ။) ဖွင့်ချတော့လဲ အဲလို မြွေပွားကင်းပွား ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေက နဲတာမှမဟုတ်တာ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ သူတို့မသိချင်ဟန်ဆောင်နေတယ်။ သတင်းမှားပေးတယ်။ သူတို့ ကိုယ့်စီမလာရင်တောင် ကိုယ်က သူ့ စီကို သွားတယ်။ သူက ကိုယ့်ကို မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံသလို ကိုယ်ကလဲ သူ့ကိုယ် မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံတော့ဘူး။ တစ်ချို့ က သူနဲ့ တူတူနေပေးတဲ့ အချိန်မှာ ကျန်တဲ့လူတွေ က လုပ်စရာရှိတာကို နာရီဝက်ရရ တစ်နာရီရရ လုပ်လို့ ရတယ်။ ကျနော်တို့အဲလိုလဲ တကယ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
၂၀၀၄ နောက်ပိုင်း ဗိုလ်ခင်ညွန့် နဲ့ နအဖ ဝရမ်းပြေးနဲ့ မိန်းမပျက်လို ပြဿနာတွေ တတ်ကြ။ ကံဆိုးသူ ဗိုလ်ခင်ညွန့် အာဏာကျ။ သူ့ သြဇာမကင်းတဲ့ အဖွဲတစ်ခုလုံးလဲ မြေလှန်ခံရတဲ့ နောက်ပိုင်း မှာတော့ ပြည်တွင်းမှာ ထောက်လှန်းရေး မလုပ်နိုင်ဘူးပြောလို့ ရလောက်အောင် ထောက်လှန်းမှုညံ့ဖျင်းလာပါတယ်။ ထောက်လှန်းရေး နေရာကို ဗိုလ်ခင်ညွန့် ရှိစဉ်က ချောင်ထဲမှာ အမှီးကုတ်ပြီးနေရတဲ့ ဗိုလ်အေး အကြံအရပေါ်လာတဲ့ စွမ်းအားရှင်ဆိုတဲ့ ရပ်ကွက် လူမိုက် ဂလေဂချေဂိုဏ် သြဇာတတ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဗမာပြည်ထောက်လှန်းရေး ဘယ်လောက် ယိုယွင်နေလဲ ဆို လက်ရှိလုပ်သွားတဲ့ (၂၀၀၇) ကိုကြည့်တာနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။ အဖွဲအစည်းနဲ့လူနာမည် ရာထူးကို သေချာအောင်မပြောနိုင်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ထောက်လှန်းရေး ကြီးဆိုး စဉ် Passport လျှောက်လို့ မရတဲ့ လူတော်တော်များများ Passport တွေရလာပါတယ်။ နောက် နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေတဲ့ အခမ်းအနားတွေ မှာ လူမိုက်လိုလို၊ ဝရမ်းပြေးလိုလို လူတွေ အများကြီး ကင်မရာတကားကား အသံဖမ်းစက်တကားကား နဲ့ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် လာကြည့်တာ ၂၀၀၄ နောက်ပိုင်းမှပါ။ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ရှိစဉ်က လည်း အသံဖမ်းတာ၊ ဓါတ်ပုံ ရိုက်တာ၊ ဗီဒီယို ရိုက်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ပါ။ ပြည်တွင်းမှာတောင် သူတို့ လုပ်နေကြ Informer လူတန်းစားကောင်းကောင်းမမွေးနိုင်လို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ၊ NLD ကလူတွေ ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်၊ အသုဘ၊ ဆွမ်းကျွေး စတဲ့ သာရေးနာရေး ပွဲတိုင်း ကင်မရာကြီးတွေ တကားကားနဲ့ လူမိုက်လိုလို အရူးလိုလို သူများစားသောက်နေတာကို သရေတမျှားမျှားနဲ့ ကြည့်ရင် ရိုက်ရင် လုပ်နေရတာပါ။ အဲဒီတော့ ပြည်တွင်းမှာတောင် ထောက်လှမ်းရေး ကို သေသေသပ်သပ်မလုပ်နိုင်တဲ့ နအဖ ဆိုတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့လူတွေက ပြည်ပ မှာ စပိုင်(SPY) လွတ်ထားတယ် ဆိုတာတော်တော် မဖြစ်နိုင်စရာပါ။ အလကားနေရင် မျက်နှာလုပ် ချင်လို့ သခင်အားရကျွန်ပါးဝ လုပ်တဲ့ Informer လို တစ်ရူးစက္ကူတွေတော့ ရှိနေမှာ ပေါလေ။ နအဖ ကိုယ်တိုင် စနစ်တကျလွတ်ထားတဲ့ SPY Network ဆိုတာကတော့ နအဖကို အထင်ကြီးလွန်းရာရောက်တယ်ထင်တယ်။ သံရုံးနဲ့ တွဲထားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတို့ ၊ နောက်စစ်မှုထမ်းဟောင်း၊ ကြံ့ဖွတ်အစီအစဉ်နဲ့ လွတ်ထားတဲ့ Show Job တွေထဲတော့ မျက်နှာလို အားရလုပ်ပြီး သတင်းပို့ တဲ့လူတွေ ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့။ နအဖ လုပ်နေပြောနေတဲ့ အလွဲတွေ အကုန်လုံးအပေါ်ကြည့်ပြီး တွက်ရသလောက်တော့ စပိုင် (SPY) ထားနိုင်လောက် တဲ့ အစိုးရမဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ဆုံးဗျာ စပိုင်ဆိုတာတကယ်ရှိနေတယ်ထားအုံး ကျနော်တို့ လုပ်စရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ ဖျောင်လို့ ရရင်ဖျောင်ပြစ်လိုက်။ ခြေခင်းလက်ခင်း သာရင်ပေါ့လေ။ နောက်ဆုံး မသတ်ရဲ ရင်တောင် တခြားအကြောင်းတစ်ခု ပြပြီး စိန်ခေါ်ထိုးဗျာ။ မိန်းမစပိုင်ဆိုရင် ပိုတောင်ကောင်း သေးတယ် အတည်ပေါက်သွား ပြီး သတ်မယ် ဘာမယ် ချိမ်းခြောက်လိုက်ဗျာ။ နောက်တနည်း ကတော့ မသိချင်ဟန်ဆောင်ပြီး သတင်းမှားတွေ သူတို့ ကနေတဆင့်ပို့ ။ Counter ခေါ်မှာ ပေါ့။ ဒါတွေကို ကျနော်စိတ်ကူးယဉ်ပြီးပြောနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှု နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတိုင်း Informer (တချို့ ပြောသလို ) Spy တွေ ကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ရမယ် ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ အချင်းချင်း လက်သိပ်ထိုးပြီး ပြောထားလိုက်ရင်ပြီးပြီ။ ဒီကောင်စပိုင် ပါလို့ လက်ညှိုးထို့ ဖွင့်ချလိုက်တာ ကတော့ ဘာမှထိရောက်မှု မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ မသိချင်ဟန်ဆောင်ပြီး ပြန်အသုံးချမလား ဒါမှမဟုတ် ဘယ်တော့မှ သတင်းပို့ လို့ မရအောင် ခြိမ်းခြောက်ပြီးနှင်ထုတ်တာတို့ ၊ ဖြောင်ပစ်တာတို့ လုပ်လိုက် တာပို့ သင့်တော်မယ် လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ စပိုင်လို့ အော်နေမဲ့ အစား သေချာရင် အသုံးချမလား ရှင်းပစ်မလား တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ကျနော် CBox တွေမှာ တွေ့ နေရတာအများစု က တဖက်နဲ့ တဖက် ဆဲနေကြတာတွေပါပဲ။ တကယ်ကို အယုတ္တအနတ္တ တွေပါ။ ဒီကိစ္စလဲ အစတော့မရေးတော့ဘူး နေတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒါကလဲကြာတော့တော်တော်ကို နှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်။ ကျနော်လဲလူပဲဗျာ စက်တင်ဘာ ကာလ ဘုန်းကြီးတွေ ကျောင်းသားတွေကို နအဖ စစ်သားတွေရိုက်တာနှက်တာမြင်တော့ ဒေါသထွက်တယ်၊ စိတ်တိုတယ် သူတို့ ကိုလဲ အဲလို ပြန်လုပ်ချင်တယ်။ အဲဒီရက်ပိုင်းတုန်း က ကျနော်ကိုယ်တိုင် မဆဲပေမဲ့ ဆဲတဲလူတွေကို နားလည်လို့ ရတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းထိ အဲဒီအရှိန် က မကုန်သေးပဲ ဆဲနေဆိုနေတာတော့ သိပ်မဖြစ်သင့်တာ့ဘူးထင်တယ်။ ဆဲလို့ ဘာဖြစ်မလဲ ဆိုတော့ ဒေါသတွေ ထွက်တယ်။ အဆိုးဆုံးက ဇော်မျိုးလို (ကျနော် စွေစောင်းကို ဇော်မျိုးထက် လေးစားပါတယ်။ စွေစောင်းက သူယုံတာသူရေးနေတာပါ။ ) ဝါဒထူထောင်နေ တာလိုလို ၊ သူကြောင်သလို လိုက်ကြောင်မှ ဒီမိုကရေစီရတော့မှာလိုလို၊ မည်းမည်းမြင်ရာ ထင်ရာရှောက်ရေးနေတဲ့ လူက “ဒီမိုကရေစီ သမားများဆဲကြပါ” (အတိအကျမမှတ်မိပါ။) ဆိုတဲ့ စကားမျိုးရေးလာတော့ရင်နာတယ်။ ကျနော်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ သူအချို့ ကို မဆဲဖို့ ပြောတယ်။ သံတူကြောင်းကွဲ အဖြေမျိုးတွေကတော့ သူတို့ ဆဲလို့ ကျနော်တို့ ဆဲပါတယ် ဆိုတဲ့ အဖြေမျိုး ပဲရတယ်။ ကျနော့ အမြင်တော့ ချိတ်ချိတ်ခြင်းမို့ ငြိတာပါ။
ကိုယ်ရပ်တည်ချက်ကိုယ်ပဲတွေး စေချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဆဲလို့ နအဖ ပြုတ်သွားမလား။ အဲလို ဆိုရင်တော့ ကျနော်လဲ ဆဲမယ်။ စာရေးမဲ့ အချိန်တွေ အကုန် အပြင်ထန်ဆုံး အပြောင် မြောက်ဆုံး ဆဲလုံးတွေ တွေး ပြီးဆဲမယ်။ နောက်ဗျာ ဗိုလ်သန်းရွှေ ကိုယ်တိုင် CBox ထဲလာ လို့ဆဲလိုက်တယ် ဆိုတာမျိုးက လက်ခံပေးနိုင်သေတယ်။ အခုဆဲတဲ့လူတွေက ဘာမှအရေး ပါတဲ့လူတွေလဲမဟုတ်ဘူး။ အဆိပ်ပင်မို့ သတ်တယ်ပြောရအောင်လဲ။ နအဖ ပြိုရင်သူတို့ လဲ ဘယ်နားနေရမလဲ တောင် သိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော် အမြင်တော့ ရုရှက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကို ဆဲတာနဲ တိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက် ၊ နောက်ဆုံး တတ်နိုင်လို့သွားသတ်လဲ ဘာထူးလာမှာမို့ လဲ။ နအဖ က ဆက်ရှိနေမှာပဲ။ နအဖ စစ်ကျောင်းက တစ်နှစ်ကို ရုရှကလူမျိုး ၃၀၀၀ လောက် ထွက်နေတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဟိုဘက်က စစ်ဗိုလ်များကလဲ တိုင်းပြည်ချစ်လို့ စစ်ထဲဝင် တယ် ဘာညာဆိုတာတွေ ပြောနေမဲ့ အစား မဆဲပဲ မနေနိုင်ဘူးလား။ တစ်ဘက်က မဆဲပဲနေလိုက် ရင် ဆဲတဲ့လူငပေါ ဖြစ်မှာပဲ။ ဘယ်နှစ်ခွန်းဆဲနိုင်မလဲ။ နောက် CBox ပိုင်ရှင်တွေကလဲ ဆဲတာ နဲ့ ဘလော့လိုက်။ ဆဲနေဆိုနေတာနဲ့ တော့ ဗိုလ်သန်းရွှေလဲ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ နအဖ လဲဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ နအဖ နဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို မုန်းကြောင်းပြဖို့ ဆဲတာဆိုရင်လဲ သူတို့ မသိစိတ်မှာ ပြည်သူလူထုက သူ တို့ ကိုဘယ်လောက်မုန်းတယ် ဆိုတာသိပြီးသား။ ခင်ဗျားတို့ သတိထား မိမလား မသိဘူး ဇော်မျိုး ဆိုတဲ့ လူမဆဲဘူး။ သိပ်အကျအနကောက်ချင်သူတွေ အတွက် ထပ်ပြောမယ် ဆဲလို့ အဆင့်မရှိဘူး လို့ ပြောမဲ့ ခပ်ကြောင်ကြောင်လူထဲမှာ ကျနော်မပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆဲတာနဲ့ ဒီမိုကရေစီ နဲ့ တော့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။
အပေါ်မှာ ကျနော်ရေး ခဲ့တဲ့ တချို့ အချက်တွေ ကိုဖတ်ပြီး ရန်သူ့ ဘက်ကလိုက်ရေးတယ် လို့ဝေဖန်ရင်လဲ ခံယုံပဲဗျ။ ကျနော် ဒီလိုတွေ ရေးလို့ ကျနော့စာတွေကို မဖတ်တော့ဘူး ဆိုလဲ တော်လှန်ရေးကို တခြားနည်းနဲ့ သွားယုံပဲ။ တကယ်တော့ ကျနော်စာရေသည်ဖြစ်စေ၊ မရေသည်ဖြစ်စေ၊ ကျနော် တော်လှန်ရေးလုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မလုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ နအဖ ကိုတော့ တော်လှန်နေကြဦးမှာပဲ။ ငကန်းသေငစွေလာလိမ့်မယ်။ ကျနော်ကတော့ ကျနော့စာတွေ ကို ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေ တင်မဟုတ်ပဲ နအဖ ပုဂ္ဂိုလ်များကို လဲ ဖတ်စေ့ချင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုလဲ ကျနော်တို့ ဘာတွေခံစားနေတယ်၊ ဘာကြောင့်ဘာလုပ်တယ် ဆိုတာမျိုး တွေသိစေ့ချင်ပါ တယ်။ သူတို့ နားလည်နိုင်ရင်၊ ဒါမှမဟုတ်နားမလည်တောင် အတွေးတစ်စလောက်များရသွား ပြီး ဆက်တွေးမိရင် ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တကယ်ထားပါတယ်။ ကျန်တော် တပ်နဲ့ ပြည်သူ လက်တွဲကူ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်မျိုးလဲ မတင်ဘူး။ တပ်အချင်းချင်း ထချပြီးဆိုတဲ့ ဟာမျိုးလဲ မရေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ ဘက်က တကယ်လုပ်ပြနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ တစ်နေ့ တပ်ထဲက ပြည်သူ့ ဘက်မှာ ရပ်တည်မဲ့ တပ်မှုး၊တပ်သား တွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲလို ထွက်လာဖို့ က ကျနော်တို့ ဘက်ကနိုင်ချေရှိမှ ထွက်လာမှာပါ။ အလကားနေရင်း အလုံးအရင်း နဲ့ ထွက်လာဖို့ ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ သေချာမှစွန့် မှာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား။ လူဆိုတာ ဘာပဲပြောပြော ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း ကို အရင်ကြည့်မှာပဲ။ သေချာချာ မသေချာချာ ကိုယ်ယုံတာလုပ်မယ် ဆိုပြီး အသေခံထွက်လာတဲ့ လူမျိုးကတော့ အရှားသား။ စက်တင်ဘာမှာ ပြန်ကြည့်ရင် ပဲ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြတဲ့လူ အရေအတွက်ဟာ တစ်နိုင်ငံ လုံးနဲ့ ယှဉ်ရင် ဘာမှ မဟုတ်ဘူး လို့ ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ ရပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ကြည့်ပြီး နအဖကို မကျေနပ်တာ ဒါလောက်ပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးကတော့ ဗိုလ်ကျော်ဆန်းလို အရပ်နဲ့ ခေါင်းနဲ့ အချိုးညီတဲ့ နအဖ ရင်မကြီးတွေ ပဲတွေတတ်တာပါ။ ကျန်တဲသူတွေလဲ မုန်းလိုက်တာမှ အူထဲကရောအသည်းထဲကရောပဲ။ဘာလို့ မထွက်လဲ ဆိုတော့ သေမှာကြောက်လို့ ဗျ။ တချို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သေမှာကြောက်တယ်။ တချို့ လဲ မသေချာပဲ နဲ့မသေချင်ဘူး။ ဘာမှ မကြည့်နဲ့ဒီထဲမှာ ၉၀၊၉၆၊၉၉ အရေးအခင်းတွေ တသီကြီးမှီ ခဲ့တဲ့လူတွေ အများကြီးပါ။ ဘယ်သူဘယ်လို ရပ်တည်ခဲ့လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးကြည့်ရအောင်။
ကျနော်တော့ ရုရှကလူတွေကို မဆဲဘူး။ မဆဲမဆို၊ ငြင်ခုန်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့ ကြားကျတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေ (ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်မာရေး ဘာလို့ နိမ့်နေလဲ) ကိုဆွေးနွေးချင်တယ်။ တကယ်ဆွေးနွေးကျရင် ဘာကြောင့်ဆိုတာသိလာမယ်။ အမှန်ကို တကယ်သိလာတဲ့လူက အကြာကြီးမှား မနေနိုင်ပါဘူး။ နအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာ။ ရုရှက စစ်ဗိုလ် တွေဆိုတာ တလမှ ဒေါ်လာ ၂၅၀ နဲ့ နေနေရတာ။ စားနိုင်သောက်နိုင်တဲ့ ရာထူးရောက်ဖို့ က လည်း စောင့်ရဦးမယ်။ ဒါလဲ အထက်အရာရှိနဲ့အဆင်ပြေမှ။ အဲဒီတော့ သူတို့ မှ အမှန်တရား ကိုလက်ခံနိုင် ဖို့နေရာကျန်သေးတယ်လို့ ထင်တယ်။ တချို့ တချို့ လဲ လူမြင်ကွင်းတော့ ယူနီဖောင်း လေး ဝတ်ပြီး ဇောင့်ကြွားဇောင့်ကြွားလုပ်၊ ကာနယ်ကြီး အိမ်ကြ ဖိနပ်တိုက်ပေး၊ အဝတ်ရုပ်ပေး ဘဝကို ပဲလောက နိဗ္ဗာန် ထင်နေ မှာပဲ။ အဲလို လူတွေချည်းပဲ ဆိုတာတော့ ကျနော်မယုံဘူး။ လူကောင်းလေးတွေကို တော့ ရှာကြည့်ချင်သေးတယ် ။ ဆွေးနွေးချင်သေး တယ်။ သူတို့ ကိုယ်ခံအားကို လဲကျနော်ယုံတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့ ရောသူတို့ ရော တိုက်ပွဲပြင်ပမှာပါ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ဆက်ဆံလို့ ရတယ်။ တတိယပုံစံပေါ့ဗျာ။ ကျနော်လဲ တော်လှန်ရေးကြောင်း မပြောဘူး။ သူတို့ လဲ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ဘုန်းတော်မဘွဲ့ နဲ့ ပေါ့ဗျာ။ သူတို့ လဲ ရုရှား ရောက်တုန်း အင်တာနက်ကို ဖောဖောသီသီ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးခွင်ရတာ။ မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်ရင် ဘယ်လိုမှ ဒီနေရာတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လာလို့ ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ တော်လှန်ရေး သမားကောင်းဆိုတာ တိုက်တာခိုက်တာ တစ်ခုထဲထူးချွန်ယုံနဲ့ မဖြစ်ဘူးဗျ။ သံခင်းတမန်ခင်းလဲတတ်ရမယ်။ ရန်သူကို စည်းရုံးနိုင်ရမယ်။ တကယ့်ခေါင်းဆောင်ကောင်း တွေဆို ရန်သူကိုယ်တိုင်က လေးစားတယ်။ (မဟာဗန္ဓုလ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ရွမ်းမဲလ်) ဖမ်းမိရင်တော့ သတ်မှာပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီရတာနဲ့စစ်သားတွေစစ်ဗိုလ်တွေ အလုပ် ပြုတ်စေဆိုတာမျိုးလဲ လုပ်လို့ မရဘူး။ သူတို့ နဲ့ သူတို့ မိသားစုကလဲ သန်းချီရှိနေတာကို။ အဲဒီလူတွေ သာအလုပ်လက်မဲထပ်ဖြစ်ရင် လက်ရှိအလုပ်လက်မဲ့ ဦးရေနဲ့ ပေါင်းပြီး ကျောင်ခမန်းလိလိတက်လာလိမ့်မယ်။ အောက်ခြေ နဲ့ အရာရှိငယ်တွေ ကို ဆက်ထားရမှာပဲ။ မြွေပွေးခပိုက်ပိုက်တယ် တို့ ဘာတို့ ခပ်ကြောင်ကြောင်တွေလာမပြောနဲ့ ။ တကယ်မြွေပွေး အစစ်ဆို တပ်ထဲကထုတ်လိုက်လဲ လိုက်ကိုက်မှာပဲ။ တပ်ထဲမှာရှိနေတာမှ စောင့်ကြည့်နေလို့ရဦးမယ်။ ခင်ဗျားတို့ သိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ ကျနော် မှာဒီထက်ကောင်းတဲ့ ဥပမာမရှိလို့ ပြော ပါရစေ။ လွတ်လပ်ရေး မရခင် ဖက်ဒရယ် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကိုဝိုင်းကန့် ကွက်တော့ “၁၀ နှစ်အချိန်ရတာမှ သူတို့ ခွဲထွက်ရင် ကျုပ်တို့ မစည်းရုံးနိုင်လို့ ကျုပ်တို့ ညံ့လို့ ပေါ့ဗျာ” ဆိုတဲ့ စကား။
နအဖ ဘာကြောင့်ယိုင်နဲ့ ယိုင်နဲ့ နဲ့ ၁၉နှစ်တိုင်ခဲလဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ညံ့လို့ လို့ပဲမြင်ပါ တယ်။ ကျနော် တို့ ၁၉ နှစ်အတွင်း အတိုက်အခံအဖွဲ အစည်းတွေများလာတာပဲ ရှိတယ်။ ဘာမှ ဖြစ်မလာဘူး။ တကယ်လို အပ်တဲ့ စည်းလုံးမှုမတည်ဆောင်နိုင်ဘူး။ လက်ငင်းရည်ရွယ် ချက်ကို မပြတ်သားဘူး။ အာဏာရရေးလား။ အဏာရှင်ကျဆုံးရေးလား။ အာဏာရှင်ကျဆုံး ရေး ဆိုရင် တော့ အရင်ဆုံး အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးလုပ်ကြပါ။ တချို့ စိုးရိမ်နေသလို စည်းလုံး မှုမရှိပဲ စစ်တပ်ပြုတ်သွားလဲ ကွဲကျပြဲကျနဲ့ တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေမျိုး ကျနော် လက်မခံပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ ဝင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့သံခင်းတမန်ခင်း နဲ့ကွဲကျပြဲကျမယ် ။ ဒီမိုကရေစီဆန်ဆန် သဘောထားကွဲကျမယ် ဆိုရင် ရောင်စုံခေတ်ကို ပြန်ရောက်ဖို့ မမြင်ပါဘူး။
နအဖ ကတော့ရှင်းတယ်။ ဦးတည်းချက်ကလည်း အာဏာတည်မြဲရေးပဲ။ အဲဒီအတွက် ချော့ စရာရှိချော့တယ်။ ချောက်စရာရှိချောက်တယ်။ နောက်လူသိရှင်ကြားဘယ်တော့မှ မကွဲလွဲဘူး။ ကွဲလွဲရင်လဲ တခါထည်းကိစ္စတုံးလုပ်တယ်။ (ဗိုလ်စောမောင်၊ဗိုလ်တင်ဦး၊ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ) ကျနော်တို့ ဘက်ကတော့ ရန်သူပျော်ရုံ၊ သတင်းပေါက်ကြားရုံကွဲကျပြဲကျ နဲ့ သံသယာလည်နေ တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကလဲ နအဖ လို စည်းလွတ်ဝါးလွတ် မလုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကောင်းတွေ ကြောင့်လို့ မြင်ပါတယ်။ မကြာခင်ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေ လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှာတွေ့ပြီး စစ်ကျွန်ဘဝက လွတ်မြောက်စေလိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည်နေတုန်းပါ။
တကယ်တော့ကျနော်က ကိုယ့်ဘဝလေးနဲ့ ကိုယ် အေးအေးနေချင်တဲ့ကောင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘဝ ကအဲလို နေဖို့ ခွင့်မပေးခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ဟာ နောက်လိုက်ကောင်းတစ်ယောက် အနေနဲ့ကျနော်တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ မင်းဆိုးမင်းညစ်ဟူသမျှ ကို တော်လှန်နေဖြစ်မယ်ထင်ပါ တယ်။ ကျနော်ရေးတဲ့ စာဟာ ရန်သူပျော်စေနိုင်မဲ့ အချက်တစ်ချက်မှ မပါဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ပါခဲ့လို့ ရှိရင်လဲ စေတနာအမှားလို့ နားလည်ပေးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ လေးလေး နက်နက် ထပ်ပြောပါရစေ။ ကျနော်ခေါင်းဆောင်တွေကို ကျနော်တို့ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အကြွင်းမဲ့ မျော်လင့်ယုံကြည်နေပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ကျနော်မယုံကြည်တော့တဲ့ နေကြရင်လဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ လက်တွဲဖြုတ်ပြီး ကိုယ်နည်းကိုယ်ဟန်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်နေပါဦးမယ်။သူခိုး ဘဝ ကစပြီး တိုက်ပွဲဝင်ပါ့မယ်။ ဗမာစကားပုံရှိပေမဲ့ အဲလိုတော်လှန်ရေးမျိုးတစ်ခါမှ မတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။ သူခိုးကြီးတော့ ဓါးပြ၊ ဓါးပြကြီးတော့ သူပုန်၊ သူပုန်ကြီးတော့ အစိုးရ တဲ့။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်ပဲပြောပြောကျနော် တကယ်သွားဖြစ်တဲ့ အခါကျနော် သူငယ်ချင်းတွေကို မေးပို့ ပြီးခေါ်ဦးမယ်။ ကျနော်ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးလို့ ပေါ့ ဗျာ။ ကျနော်တို့ မင်းဆိုး မင်းသူခိုး နဲ့ တန်သလား မင်းကောင်းမင်းမြတ်နဲ့ တန်သလား ဆိုတာ အာလုံးဝိုင်းပြီး စုစုစည်းစည်း အဖြေထုတ်ရအောင်။
ဒီဆောင်းပါးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဆဲချင်၊ဆွေးနွေးချင်ရင် moehtetnay@gmail.com ကိုတိုက်ရိုက်ပို့ ပါခင်ဗျာ။ ကျနော်ဟာ ရွှေဘိုသား ဘလော့ပိုင်ရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ ရွှေဘိုသား မှာ စာရေးသူ သာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ။
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Saturday, December 8, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ ဟာသ / Comments: (1)
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ရဲ့အနစ်သာရဟာ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အသက်သွင်းရန် မဟုတ်
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Wednesday, December 5, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ အတွေးနဲ့အရေး / Comments: (4)
ခုရက်ပိုင်း နအဖ ဘက်တော်သား ဘလော့များ၊ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ဘလော့များ မှာ သတင်းစာရှင်းလိမ် ပွဲ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့ တော်တော်များများ ရေးသားနေတာကိုတွေ့ ရ ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဟုတ်သော်ရှိမဟုတ်သော် ရှိ နအဖ ရဲ့ လမ်းပြမြေ ပုံကို ထောက်ခံ ရေး ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်း ကို အတင်းရောဇွတ်ရော ဆွဲယူရေးသားနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စင်ပေါ်တင်ပေးသလို ဖြစ်မှာ စိုးတဲ့ အတွက် ဘယ်မှာဖတ်ခဲ့တယ် ဆိုတာတော့ မပြောတော့ပါ ဘူး။ ဟိုဘက်လိုလို ဒီဘက်လိုလို ခွနေတဲ့ ဘလော့တစ်ခုမှာ ရေးထားတဲ့ အဲဒီ ဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်း ရှင်းလင်းစရာလေးတွေ ရှိလို့ အခုဆောင်းပါကိုရေးလိုက်တာပါ။
အစကတည်း က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို တန်းတူရည်တူဆွေးနွေး ဘက်အဖြစ် သတ်မှတ် လက်ခံခဲ့ တာမဟုတ်ကြောင်းကို တော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အဖြစ်ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း ထားတာ တစ်ခုနဲ့ တင် တခြားသက်သေ ရှာနေဖို့ မလိုအပ်တော့ပါ။ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်တာတွေ၊ အကျဉ်းသားလွတ်ပေးတာ တွေ ဆိုတာ ဟန်ပြလုပ်ဆောင်မှု သက်သက်ဖြစ် ပါတယ်။ တကယ်လက်တွေ လွတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဆိုတာ လွတ်ပေးတဲ့ အကျဉ်းသား ဦးရေ နဲ့ ချိန်ကြည့်ရင် တစ်ရာခိုင်နှုန်းတောင် မရှိဘူးဆိုတာလဲ အားလုံးသိပြီးဖြစ် ပါတယ်။
စက်တင်ဘာတော်လှန်ရေး ပြီးပထမဆုံး အကြိမ်သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု၊ အာရုဏ်ကျမှုကို တော်တော်လေးရတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင့်အရင် က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တို့ လို့ ပါပဲ ရှိသမျှအပေါက် အကုန်ပိတ် ပြီးလုပ်ဇာတ်တွေခင်း တာပေါ့ဗျာ။ ဗိုလ်ကျော်ဆန်း၊ ဗိုလ်ခင်ရီ တို့ တာဝန်ခံ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ဆိုတော့လဲ ထုံးစံ အတိုင်း ဇွတ်ဒရွတ် ဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ကိုယ့်စာရိတ်ကိုယ်စား နားထောင်၊ ဇာတ်တိုက်ထားတဲ့ မေးခွန်းတွေမေး ဆိုတာထက် ဒီသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲရဲ့ထူးခြားချက်က အတိုက်အခံအားလုံး နဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအား လုံးကို တစ်ဘက်လှည့်ပြီး ရာဇသံပေးလိုက်တယ် လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ လမ်းပြမြေပုံ အတိုင်း ရှေ့ ဆက်သွားမယ် ဆိုတာ တစ်ဘက်လှည့်နဲ့အသိပေး ပြောဆို သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရေး နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ NLD ရဲ့အခန်းကို လဲ လုံးဝ ထဲ့ သွင်း တွက်ချက်ခြင်း မရှိတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ နအဖ ဟာ အချိန်ဆွဲဖို့ နဲ့နိုင်ငံတကာ ဖိအား လျော့ကျရေး အတွက် ဒီ ဆွေးနွေးပွဲ ကို ယောင်ပြလက်ခံ ခဲ့တယ် ဆိုတာကို အစောကတည်းက သိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ ဒီလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန် မျက်နှာပြောင် တိုက် ပြီးဆွေးနွေးပွဲ ကို ကြောခိုင်းမယ် လို့ တော့ ဘယ်သူမှ ခန့် မှန်းမိမယ် မထင်ပါဘူး။ ခုဟာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆွေးနွေးသည် ဖြစ်စေမဆွေးနွေး သည်ဖြစ်စေ အမျိုးသားညီလာခံ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ကို စတင်ရေးဆွဲတော့ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆွေးနွေးလို့ လဲ ဘယ်လို ဥပဒေ တစ်ခုမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်သလို ၊ မဆွေးနွေးလို့ လဲ ဘယ် ဥပဒေတစ်ခုမှ ချန်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ နအဖ အနေနဲ့ဆက်ဆွေးနွေးလဲ ဆွေးနွေးဘက်တွေ ကို ထမင်းသိုးဟင်းသိုး အနေနဲ့ သဘောထားမယ် ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါပြီ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမဲ့ အဓိက အချက်ဆိုတာက လဲ စစ်တပ်နဲ့အတိုက်အခံပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး သက်သက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကလည်း တော်တော်ရီစရာ ကောင်းတဲ့ အချက်လို့ ပဲမြင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမျိုးသားခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့့လေးစား ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အဆင်ပြေရင် အတိုက်အခံအားလုံး နဲ့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ တွေးလုံးကတော့ တော်တော် နိမ့်ပါးလွန်းတယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ စစ်တပ်ဘယ်လောက်အဆင်ပြေပြေ စစ်တပ်ရဲ့ဖက်ဆစ်ဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ လမ်းစဉ်တွေကို မစွန်လွတ်သမျှ ပြည်သူဟာ စစ်တပ်ကို လက်ခံနိုင်လိမ့်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ သွေးရူးသွေးတန်း အတွေးအခေါ်သက်သက်နဲ့ သာ ဒီစကား မျိုးကို အရှက်ကင်းကင်းပြော သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အစောကတည်း က မှန်တာကို လုပ်ခဲ့ တယ် ဆိုရင် ပြည်သူလူထု ဟာ နလပိန်းတုံး မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူဆိုတာ အစဉ်အဆက် အမှန်တရား ဘက်ကနေခဲ့တာပါ။ အာဏာရှင် ကိုလက်မခံခဲ့တာပါ။
နောက်ထပ် ရီစရာကောင်းတဲ့ အချက်က ပြည်သူ့ ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်ပြီး ဖွဲစည်းပုံကို အတည်ပြု မယ် ပြီးတော့ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်၊ အဖွဲအစည်းတိုင်း လွတ်လပ်စွာပြော ဆိုစည်းရုံးခွင့် ရှိမယ်ဆို တဲ့ အချက်တွေပါပဲ။ ပြည်သူဆန္ဒကို နအဖ ဘယ်လိုခံယူလေ့ရှိတယ် ဆိုတာလူတိုင်း သိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေ၊ ရုံးဝန်ထမ်းတွေ၊ ဆရာဆရာမတွေ နောက် သူတို့ ရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင် အဖွဲ့ အစည်းတွေကို နီးစပ်ရဘောလုံးကွင်းထဲ ဆွဲသွင်း ပြီးတော့ စင်ပေါ်ကပြော သမျှထောက်ခံပါတယ် အော်ခိုင်း နဲ့ လုပ်ယူထားတဲ့ ပြည်သူ့ ဆန္ဒတွေ ချည်း ခံယူလာတာ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနားကပ်နေပြီ။ နောက်လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးဟောပြောခွင့် ဆိုတာလဲ ဘာမှ မစည်းရုံးမဟောပြောပဲ လမ်းပေါ်လှည့် မေတ္တာပို့ နေတဲ့ သံဃာတွေကို တောင် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်တဲ့ အစိုးရဆီ ကနေ ဘယ်လို လွတ်လပ်စွာ ဟောပြော စည်းရုံးခွင့်မျိုး မျော်လင့်နိုင်မလဲ ဆိုတာတော့ ကျနော်တော့ တွေးကြည့်လို့ ကိုမရဘူး။ နောက် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတာလဲ တောထဲကဆင်ကို ခမဲပေးသလို ပါပဲ။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို တောင် အကြောင်းပြချက်ပေါင်း များစွာနဲ့ မျက်နှာပြောင်တိုက် ငြင်းပယ်ခဲ့ သေးတာပဲ ။ အာဏာရဲ့ အရသာကို နှစ်နှစ်စာလောက် မြည်းစမ်းခွင့်ရတဲ့ အချိန်ကတည်း က မလွတ်တမ်း ဖက်တွယ်ထားတဲ့ စစ်အစိုးရအနေ နဲ့အနှစ် နှစ်ဆယ်စာလောက် အရသာတွေ သိတဲ့နောက် ထပ်အရူးကွက်နင်း ဦးမယ်ဆိုတာ အလွယ်တကူ သိထားနိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါ အချက်တွေ ကတော့ နအဖ သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲ ရဲ့ ဆိုလိုရင်းတွေ အပါ် ကျနော် တတ်နိုင်သလောက် ပြန်လည်း ဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အခု အခြေအနေ မှာ စစ်အစိုးရ ဘက်က ရန်စည်းဖြတ်ပေးလိုက်ပြီ ဆိုတာကို ကျနော်တို့ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား အများစုသိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အသွင်ပြောင်းရေးတို့အထီကျန်မှုဖြင့် အာဏာရှင် ဖြုတ်ချရေးဆိုတာတွေ ဖြစ်လာဖို့ အခွင့်အရေးတော်တော် နည်းပါးသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်ပါဝ နအဖ ဟာ လက်ရှိအနေအထား မှာ ကြေးစား ဘလောဂါတွေ ကြေးစား မီဒီယာတွေ ထူထောင်ပြီး တော်လှန်ရေး စိတ်ရှိသူတွေ တွေဝေယိမ်း ယိုင် အောင် တန်ပြန်ထိုးနှက်နေပါတယ်။ တစ်ချို့ ဆောင်းပါးတွေ ဆိုရင်စေတနာ ဗရဗွနဲ့တင်ပြဆွေးနွေး ဟန် နဲ့လူထုကို အာရုံပြောင်းဖို့ အားထုတ်နေတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ အထင်ကရအတွေ အခေါ် လမ်းကြောင်းကတော့ နအဖ နဲ့ ပူးပေါင်းပြီ လမ်းပြမြေပုံ လက်ခံကြိုဆို ရေးသက်သက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
ကျနောဖတ်ခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခုရဲ့အာဘော်မှာဆိုရင် အတိုက်အခံတွေ အနေနဲ့ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို အသက်သွင်းဖို့ မကြိုးစားသင့်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့အစိုးရဖြုတ်ချ ရေး လမ်းကြောင်းကို မသွားသင့်တဲ့ အကြောင်း စေတနာသံနှောပြီး လူငယ်ထု ကို တွေဝေအောင် ကြိုးစားနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောကြကြေး ဆိုရင် ဘယ်သူမှ သွေးထွက်သံယိုအဖြစ်မခံ ချင်ကြပါဘူး။ စစ်တပ်ကသာ အရင်ကတည်းက နားလည်မှု ရှိရှိနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေ ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မကြာသေးခင်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့ တဲ့ စက်တင်ဘာတော်လှန်ရေး ဆိုတာလဲ ပေါ်လာခဲ့မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ ဆိုတာ တတ်နိုင်သရွေ့ ကိုယ့်ထမင်းကို ယက်ခပ်စားပြီး အေးအေး နေချင်ကြတဲ့ လူတွေပါ။ သူများကို ဒုက္ခမပေး တတ်သလို့ ကိုယ်ကိုကိုယ် ဒုက္ခဖြစ်စေမဲ့ အဖြစ် မျိုး ကိုလဲ တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ချင်တဲ့ လူတွေချည်းပါပဲ။
ကိုယ့်အပေါ်ပါးရိုက် နားရိုက် ဂျပန်ဖက်ဆစ်တွေကို တောင် အသက်ခံရမှာ စိုးရိမ်လို့ဖွက်ပေးထားခဲ့ တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ မနည်းပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ လူမျိုးတူ စစ်တပ်အပေါ်မှာ ဝါဒ အရ လက်မခံနိုင်တာ ကလွဲလို့မုန်းတီးစိတ်လဲကြီးကြီး မားမားမရှိပါဘူး။ တကယ် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို သွားချင်တယ်ဆိုရင် စက်တင်ဘာတုန်းက ဖမ်းစည်းထားတဲ့ သံဃာတော်တွေ ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဝင်းတင် တို့ လို့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေ ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား တွေ နဲ့ လူငယ်ကျောင်းသားတွေ အစရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို အရင်လွတ်ပေး ချင်းအားဖြင့် စစ်အစိုးရအော်နေတဲ့ နိုင်ငံအပေါ်ထားတဲ့ စေတနာဆိုတာကြီး ကို လက်တွေ့ ပြနိုင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဆွေးနွေးနေဖို့ မလိုပါဘူး။ လူထုကို ခြိမ်းခြောက်ဖမ်းဆီးနေဖို့မလိုပါဘူး။ တကယ်စေတနာအမှန် နဲ့အဘက်ဘက်က မှတ်ကျောက်အတင် ခံနိုင်တဲ့ လမ်းပြမြေပုံ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ဒီလုပ်ရပ်တစ်ချက်ထဲ နဲ့ ပဲ သက်သေပြလို့ ရပါတယ်။
ခုချိန်ထိ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဥပဒေမဲ့ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အကျဉ်းသားတွေ ရှိနေသမျှ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာနဲ့ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရေး ဆိုတာတွေကို ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘယ်လို ဦဏှောက် ဘယ်လို အသိဥာဏ်နဲ့ လက်ခံပေးရပါ့မလဲ။ တကယ်လူထုတောင်းဆို နေတာ က NLD ကိုအာဏာလွဲ ပြောင်းရေး မဟုတ်ပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာ၊ လူပီသစွာ ဘယ်သူ မျက်နှာမှ ကြည့်စရာမလို ပဲ လူအခွင့်အရေး ပြည့်ပြည့် စားဝတ်နေရေး ပြေလည်စွာ နေထိုင်ဖို့ပါ။ အခြေခံဥပဒေကို လူထုက သဘောတူတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ကို ကျင်းပမယ် ၊ အတိုက် အခံတိုင်း ပါတီတည်ထောင်ခွင့် ရှိမယ် ၊ လောလော ဆယ်တော့ တိုင်းပြည် ချောက်ထဲကျမှာ ဆိုလို အတိုက်အခံတွေကို့ ဖမ်းထားရပါတယ် ဆိုတာကလဲ တော်တော် ယုတ္တိကင်းမဲ့ တဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပါတယ်။ တကယ်တမ်းသာ တိုင်ပြည်ချောက်ထဲဆွဲ ချမဲ့ လူတွေဆို ဘယ်အချိန်လွတ်လွတ် ချောက်ထဲဆွဲချမှာပါပဲ။ အခြေခံဥပဒေရေး ဆွဲ ပြီးရင်တော့ တိုင်းပြည် ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ သဘောများ သက်ရောက်နေတယ်လို့ မတွေး မိဘူးလား ဆိုတာလဲ မေးချင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ နအဖ ဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ပြပြီး ဟစ်တလာလို နှစ် တစ်ထောင် အာဏာ တည်မြဲရေး စိတ်ကူးဖဲရိုက်နေတာ ကြာပါပြီ။ ပါးစပ်ကတော့ ခုချိန်ထိလူထုကို အသံကောင်း ဟစ်ပြနေဆဲပါ။ နအဖ အပေါ်ယုံကြည်ထောက်ခံတယ် ဆိုတာတကယ်တော့ နအဖ ကိုမှီပြီ အလုပ်ဖြစ်နေကြ တဲ့ နအဖ အောက်စွဲလက်တစ်ဆုပ် စာလူစုပဲရှိတယ်ဆိုတာလဲ အားလုံးအသိပါ။ ကိုယ့်ကို ကို အောက်စွဲ လို အထင်မခံ နိုင်တဲ့ (အောက်စွဲမဟုတ်ရင်အောက်မ) စာရေးတဲ့ လူတွေကို တစ်ခုတော့ပြော ချင်ပါတယ်။ နအဖ ရဲ့ ဘုန်းတော်ဖွဲ့ ကို ကြိုက်သလို ရေးကြပါ။ ဒါပေမဲ့ စက်တင်ဘာတော်လှန်ရေး ဟာ ခင်ဗျား တို့ စွပ်စွဲ သလို ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကို အသက်ပြန်သွင်း ဖို့ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတော့ မြဲမြဲမှတ်ထားပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား အားလုံ ဆင်းရဲလွန်းလို့ ၊ အနိုင်ကျင့်မခံနိုင်လွန်း လို့လွတ်လပ်မှုလို ချင်လွန်းလို့သွေးနဲရေး ပြီးလျှောက်ခဲတဲ့ လမ်းပါ။ ခင်ဗျားတို့ လို့ ဟမ်းဖုံးလေး၊ မြေကွက်ကလေးနဲ့ အနာဂတ်ကို ရောင်းစားနေတဲ့ နအဖ အောက်စွဲတွေသာ နအဖ အာဏာတည်မြဲရေး အတွက် အချင်းချင်း ရိုက်နှက်ရမ်းကား ခဲ့ကြ၊ ကလောင်သရမ်းခဲ့တာပါ။ ခင်ဗျားတို့ ကတော့ သန်းရွှေ ဂုဏော အနန္တော ဂါထာရွတ်ပြီး ထစ်ကနည်းဆို NLD ၊ ဗကပ၊ အဖျက်သမား၊ တိုင်ပြည်ချောက်ထဲကျ ဆိုတာတွေ လက်ညှိုးထိုး ဖို့ လောက်လွဲ လို့ ဘာမှမှ မသိနိုင်တော့တာပဲကိုဗျ။ ခင်ဗျားတို့အရည်အချင်းပညာတွေ ကိုတော့ နှမျောပါရဲ့ ။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ တော့ ခင်ဗျားတို့ အားလုံးကို့ လူထုက ဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ လူထုပေါ်တကယ်စေတနာရှိရင် (ဘယ်သူခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်ပါစေ) လူထုက ဘယ်သူ မြောက်ပေးပေး ဖြုတ်မချဘူး။ လူထုအပေါ် ဆိုးသွမ်းတဲ့ အစိုးရဆိုရင်လဲ (ဘယ်သူခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရဖြစ်ပါစေ) ဘယ်သူတားတား လူထုက ဖြုတ်ချမှာ အသေအချာပဲ။ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ရဲ့အနစ်သာရဟာ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ကို လူထုအားနဲ့ သွားဖို့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းသာဖြစ်တယ်။
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Monday, December 3, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ ပေးစာ / Comments: (1)
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Saturday, December 1, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ အတွေးနဲ့အရေး / Comments: (0)
နိုင်ငံတကာက မာဆိုးတို့ နိုင်ငံကို စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေး ရေးလုပ်ဖို့ ဝိုင်းပြီး တိုက်တွန်း ပြောဆိုနေကြတာအား လုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဖြူမဲညီနောင် ဆိုလဲ မြန်မာအရေး ကိုယ်တိုင်လာလေ့လာ ပြီးတော့ အစည်းအဝေးတွေ တက်လိုက် အစီရင်ခံစာတွေ တင်လိုက် လုပ်နေတာ မအားရအောင်ပဲကို။ ပြဿနာတွေ ကလဲ တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာ လူအခွင့်အရေး ကိစ္စ၊ ကလေး စစ်သား ကိစ္စ အမယ်ဘုတ်သူချည်ခင်ဇာတ်လမ်း နဲ့နအဖ လဲ ဘာလုပ်လို့ ဘာ ကိုင်ရမှန်း မသိဖြစ်နေပါရောလား။ အဲဒါနဲ့အကျိုးစီးပွား တူ KIO ကို ပြဿနာလုပ်လိုက်၊ ထိုးစစ်အကြာကြီးရပ်ထား တဲ့ KNU ကို စစ်တိုက်လိုက် လုပ်ပါလေရေလားဗျာတို့ ။ အကဲခတ် သုံးသပ်တဲ့ ပညာရှင်ကြီးတွေ ကတော့ စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းသိမ်းပိုက် ချင်လို့ ၊ အာရှလမ်းမ ကြီးလို ချင်လို့ ဆိုတဲ့ မြင့်မြင့်မားမား သုံးသပ်ချက်တွေ ပေးကြတာပေါ့ဗျာ။ ကျနော် မစ္စတာမာဆိုး ကတော့ ရှစ်တန်းလေးနှစ် ဦးဏှောက်နဲ့ တွေးကြည့်လိုက်တာတော့ အကြွေးရှင်လာ တုန်း လင်မယား ရန်ဖြစ်ချင်ဟန်ဆောင် တယ်ထင်တော့တာပါပဲ။ ဆွေးနွေပွဲ လုပ်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ ပြည်တွင်းရေး က မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေလို့ ပါ ဆိုတာမျိုး ပြောမှာဆိုမှာ မြင်ယောင်နေသေးတယ်။ မယုံရင် ဖြူမဲညီနောင်ကို နောက်တစ်ခါ ပြန်လွှတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းသူတွေကြောင့် မအားနိုင်ပါဘူးလို့မျက်ရည်လေး စမ်းစမ်းနဲ့ ပြောပြ ပါလိမ့်မယ်။
မောင်မာဆိုးနဲ့ အဖွဲ့ အစည်း
စက်တင်ဘာ ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ခတ်တုံးတုံး မောင်မာဆိုးလဲ နိုင်ငံရေး မျက်လုံးလေး ကလည်ကလည် ဖြစ်လာတာပေါ့။ ဒါနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ထိထိရောက်ရောက်လုပ်တော့မယ်။ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုမှာ ဝင်ပါတော့မယ် ဆိုပြီး သတင်းဌာနတွေ ၊ အင်တာနက်ဝပ်ဆိုဒ် တွေ ဝင်ကြည့်ပြီး ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာပါရမလဲ လို့ တွေးမိတာပေါ့လေ။ ပထမဆုံး သတိရမိ တာကတော့ ဗကသ ပေါ့ဗျာ။ မာဆိုးက ခုထိကျောင်းသားကို ဗျ။ ၈ တန်းလေးနှစ်ဆက်တိုက် ကျပြီး ကတည်းက စစ်အစိုးရပညာရေး ကို မလိုချင်တော့ဘူး ဆိုပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား ကျောင်းနားထားတာ ၁၁ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျနော် ဗကသ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ ရှာဖတ်မိတယ်။ အဲဒီမှာ အံသြစရာကောင်းလောက်အောင်တွေ ရတာက ဗကသ တော်တော်များများ ကို ခုနှစ်တွေနဲ့ တွဲပြီးတွေ့ ရတာကို ဗျ။ ဒါပေမဲ့ မာဆိုးက ဘယ် ဗကသ နဲ့ဆိုင်မှန်းမသိ တော့လို့မဝင်ဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာ။ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုထဲ နဲ့ အလုပ်လုပ်နေ ကျတဲ့ လူတွေမှာ ဘယ့်နှယ့် အဖွဲ့အစည်းတွေ အများကြီးဖြစ်နေကြလဲ တွေးလို့ တောင် မရတော့ ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ပဲတွေ့ တဲ့ လူတိုင်းကို မေးကြည့်မိတယ်။ ကျနော်တို့ ဆန့် ကျင်ရတဲ့ နအဖ က တစ်ယောက်ထဲ ကျနော်တို့ ဘက်မှာ တော့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ က အများကြီး ဖြစ်နေ တာဘာကြောင့်လဲ ဆိုပြီးပေါ့။ နောက်ဆုံး မှ မာဆိုးတူ ၅ တန်းကျောင်းသားလေး က ဖြေတယ်ဗျ။ “ဦးလေးကလဲ ပါတီတစ်ခုထဲဆို ဥက္ကဌ ကတစ်နေရာထဲဖြစ်မှာပေါ့ ၊ စစ်တပ်တောင် အဲဒါတွေ အတုခိုးပြီး လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနတောင် တစ်နှစ်ခွဲပြီး ဝန်ကြီးနှစ်ပါး ခွဲထား တာ ကြည့်ပါလား” တဲ့ဗျာ။
မာဆိုးတို့ စစ်အစိုးရလဲ နိုင်ငံတကာ ရဲ့ စောင့်ကြည့်မှုကိုတော့ ဂရုမစိုက်ပဲမနေနိုင်ရှာပါဘူး။ ဒါကြောင့် တပ်တွင်းအပြောင်းအလဲ တွေကို အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်နေတာကို တွေရပါတယ်။ အားလုံးက အမြင်မကြည်တဲ့ အကြည့်တွေ နဲ့ ကြည့်နေတော့ နအဖလုပ်တဲ့ အပြောင်းအလဲ ကို မမြင်မှာ စိုးလို့ ပြောပြရဦးမယ်။ တချို့ ဟာတွေကို တရားဝင်ပြောင်းလဲ ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ တချို့ ဟာ တွေကတော့ လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတုန်းလို့ သိရပါတယ်။
၁။ ဘုရားပေါ်တက်ရင် မှတ်ပုံတင်ပါရမယ် လို့ ပြောပါတယ်။ ( မြတ်စွာဘုရား သခင်ရဲ့ လုံခြုံ ရေး ကို စိုးရိမ်လို့ နဲ့ တူပါတယ်။ မတော်စွမ်းအားရှင်နဲ့ တည့်တည့်တိုးမှ ဖြင့်)
၂။တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် ဝန်ကြီးခန့် ပါတယ်။ (အနည်းဆုံး ရှေ့ လူမသေလို့ စောင့်နေရ တဲ့ အရာရှိမင်းကြီးတွေ အတွက် တစ်နေရာတိုးတာပေါ့)
၃။တိုင်းမှုးများအပြောင်းအလဲ (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတွေတော့ အပြောင်းအလဲ လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ ဗျာ)
ကဲ မောင်ဖြူတို့ မောင်မဲတို့ ရေ နအဖ ကတော့ အပြောင်းအလဲတွေ စလုပ်နေပါပြီဗျာ။
မာဆိုးတို့ နိုင်ငံမှာ စက်တင်ဘာ တော်လှန်ရေး ပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံတကာရဲ့ တိုက်တွန်းချက် အရ ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့ အတွက် ဆွေးနွေးနေကြပြီလို့ သိရပါတယ်။ တကယ်တမ်း ဆွေးနွေးပွဲ ဆိုတာ ကတော့ ဘယ်တော့စမယ် ဘာတွေဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရ သေးတဲ့ အပြင် ကြာလေ ဆိုးလေ ဖြစ်လာတာတွေ ကတော့အများကြီးပါလား ကွယ်တို့ ။ အဲဒါ ကတော့ ဘယ်နှစ်ပွင့် ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေ ကျယ်လောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် တော့ ဆွေးနွေးပွဲ မှာက ပြည်သူနဲ့ နအဖ နှစ်ဘက်ထဲပါ။ အဲဒါကို နှစ်ပွင့်ဆိုင်လား၊ သုံးပွင်ဆိုင် လား ဆိုတဲ့ အသံတွေ ဆူညံ့နေအောင် ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ အပွင့်များလေ နအဖ စားလေ ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို သတိမမေ့ကြပါနဲ့ ။ တောင်ပေါ်မြေပြန့် သွေးခွဲတယ် ဆိုတာ အင်္ဂလိပ် က သုံးခဲ့ပြီးပါပြီဗျာ။ ပင်လုံစာချုပ်လဲ ထပ်မချုပ်ပါရစေနဲ့ ။ ပါးစပ်က Globalization အော်ပြီး တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ် ဆိုတဲ့ ပြောမျိုးတွေ ပြောလာပြီဆိုရင်တော့ နအဖ ရဲ့လှည့်ကွက်ထဲ ကားကနည်း ကျသွားမယ်ဆိုတာ သတိရကြပါ။
ဝန်ကြီးချုပ်ခန့် အပ်ရေး ဥပဒေသ
နိုင်ငံတော်တော် များများ ရဲ့ အစိုးရတိုင်းမှာ ဝန်ကြီးချုပ်၊ သမ္မတ ဆိုတဲ့ နေရာအတွက် သက်တန်းဆိုတာ ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် လေးနှစ်သက်တန်း၊ ငါးနှစ်သက်တန်း ဆိုပြီး တိတိကျကျသတ်မှတ်ချက် ရှိပါတယ်။ မာဆိုးတို့ နအဖ မှာတော့ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ကိုက စည်းမရှိ ဘောင်မရှိ အုပ်ချုပ်နေကြတာဆိုတော့ အစိုးရအဖွဲ့ သက်တန်းတို့ ဘာတို့ ဆိုတာ မရှိဘူး ကိုဗျ။ ပထမဆုံး ဝန်းကြီးချုပ် လို ကိုယ်ဆီက အာဏာလုမှာကိုလဲ ကြောက်ရသေးတာ ကို။ သီသန့် သက်တန်းသတ်မှတ်ပြန်တော့လဲ ဝန်ကြီးချုပ်သက်တန်း ကုန်ရင်ပေး ဖို့ ထွင်စရာ ရာထူးက လဲ ကုန်ပြီကိုဗျ။ အဲဒီတော့ နအဖ က ဝန်ကြီချုပ်ရာထူပေးဖို့ အတွက် အခြေခံအရေ အချင်းထဲမှာ နာတာရှည်ရောဂါသည် ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ထည့်ထားဟန်တူပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ကြည့်ပါလား ဗိုလ်စိုးဝင်း တုန်းက ကင်ဆာရောဂါသည်၊ ဗိုလ်သိန်းစိန် ကျတော့လဲ နှလုံးနှိုးစက်နဲ့ ။ ကဲ ဝန်ကြီချုပ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အရာရှိမင်းများ ရောဂါကြီးကြီးမွေးထားတော့ဗျို့ ။